Raphael Varane oo go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid, kahor xili ciyaareedka cusub – Gool FM
(Madrid) 21 Maajo 2019. Daafaca reer France ee Raphael Varane ayaa xaqiijiyay inuu sii joogayo kooxda Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda, isagoo soo gaba-gabeeyay wararka xanta ah ee sheegayay inuu baxayo dhowr bilood kahor.
Waxaa jiray warar ku aadan in Raphael Varane uu xiiseenayo ka tagista Real Madrid, iyadoo ay wararka qaar ay xaqiijiyeen in laacibka reer France uu ka codsaday maamulka kooxda inay ka fasaxaan garoonka Santiago Bernabéu.
Kooxda ka dhisan caasimada Spain ee Real Madrid ayey sidoo kale wararku sheegeen inay dul dhigtay Raphael Varane aduun dhan 500 milyan oo euros si ay u iibiso, kaasoo ah qiimaha lagu kansali karo heshiiska uu ku joogo Bernabéu.
Laakiin waxaasoo idil waxaa soo afjay daafaca reer France ee Raphael Varane, kaddib wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuuna yiri:
“Waan sii joogi doonaa halkan sanadka soo socda, waan hubaa inaan soo laaban doono, waan dagaalanay, waxaana bixinay dadaal xoogan, ma eedeyn kartid jiha gaar ah, inkastoo qaladaadkeena ay ahaayeen wax iska cad”.
“Si gaar ah, qaab ciyaareedkeyga ma uusan fiicneyn xili ciyaareedkan, laakiin waxaan ku soo laaban doonaa sidii aan horey u ahaa, waa inaan horumar sameynaa, Zidane wey u cadahay arintan”.
“Ciyaaryahan ka tirsan Juventus ayaa iga codsaday inaan noqdo badalka Allegri” - Mourinho